Ihe ikwesiri ima banyere Semalt
Taa, o siri ike ịchọta onye nwe saịtị nke na-agaghị anụworị Semalt. N'ihi na n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, ndị mmadụ ga-emeso njikarịcha SEO. Nkwalite saịtị weebụ na igwe nchọta na-aghọ isiokwu kachasị atụle. Semalt guzobere onwe ya dị ka onye ndu na nkwalite mkpokọta weebụ ma na-egosipụta ogo ya na mpaghara a ruo afọ iri.
Ndị a abụghị okwu na-abaghị uru, a na-egosipụta eziokwu niile site na ọnụọgụ ngosipụta nke mmecha oru ngo nke ọma. Ọtụtụ narị ndị ahịa na-ede nzaghachi dị mma banyere isoro anyị rụọ ọrụ n'ihi na ụlọ ọrụ ha mechara nwee ọganihu. A hapụrụ ndị niile asọmpi n'azụ na-enweghị otu ohere ịchụkwudo ọnọdụ ha n'ime injin nchọta. Ọ bịara pụta ìhè na njikarịcha SEO agaghị ekwe omume na-enweghị Semalt, nke a bụ ọkachamara anyị ebe ndị ọkachamara nọ n'ọkwá dị elu na-elekọta. Na mgbakwunye, anyị enweghị oge iji zuo ike na laurels anyị, anyị na-emezi ụzọ anyị kwa ụbọchị site na ịnye ndị ahịa ihe ọhụrụ SEO. Anyị na-agbanwe, azụmahịa gị na-aga n'ihu anyị.
Anyị kwesịrị ịkwụ ụgwọ otu anyị, nke gụnyere ndị njikwa nwere ahụike, ndị ọkachamara IT, ndị ọkachamara SEO, ndị odee akwụkwọ na ndị na-azụ ahịa. Anyị nwere ike ime ka obi sie gị ike ozugbo, enweghị ohere maka ndị nchọpụta dị na Semalt. Ọkachamara ọ bụla nwere ahụmịhe buru ibu na nkwalite SEO, nwee ike iche echiche n'ụzọ dabara adaba ma na-elekwasị anya na ịga nke ọma.
Lelee ezigbo ikpe ndị ewepụtara na weebụsaịtị anyị. Will ga-agha gị ọnụ ọgụgụ saịtị anyị wepụtara site na nnukwu nsogbu. Anyị na-arụ ọrụ na weebụsaịtị ọ bụla ma chekwaa ha mbibi dị nso. Ikekwe, ọtụtụ mmadụ nwere mmasị na nkà na usoro nke ọrụ anyị. Isiokwu a ga - agwa gị otu anyị si ejikwa ịnọ na njedebe dị elu, yana ihe kpatara Semalt bụ naanị ụlọ ọrụ na - ekwe nkwa ịga nke ọma gị.
A na-eji okwu SEO mee ihe iji na-ezo aka na mkpokọta mkpokọta n'ihi ihe ndị chọrọ nke engines ọchụchọ. Iji maa atụ, ka emechara ngwa ịntanetị echere maka ịre otu ihe ma ọ bụ aka ọrụ, ọ dị mkpa iweta ozi banyere ya karịa ọnụọgụ ndị otu na-ege ntị.
Ọbụna ndị ọrụ ahụ na-achọ ụdị ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị otú ahụ agaghị enwe ike ịhụ ha na nsonaazụ ọchụchọ ahụ ruo mgbe webụsaịtị ahụ dị na peeji nke ihu igwe nke nchọta ahụ. Nwere ike nweta nke a site na njikarịcha SEO. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ndị na-azụ ahịa na-azụ ngwa ahịa na ọrụ na ntanetị, azụmahịa ọ bụla chọrọ nkwalite ọchụchọ ugbu a.
Arezọ niile eji eme ihe maka ịkwalite SEO nke websaịtị na netwọkụ ụwa zuru ụwa niile. N'okwu nke mbụ, a na-arụ ọrụ site na iji ihe ntanetị ndị ọzọ, nke abụọ - n'ime weebụsaịtị. Ebumnuche kachasị nke njikarịcha mpụga bụ ibipụta ọdịnaya ya na mpụga weebụsaịtị. Nke a na-enye ọtụtụ okporo ụzọ na ụzọ a na-anabata njikọ nke weebụsaịtị maka mgbasa ozi a na-akwalite, yana na-enye aka na nkwalite nke ọnọdụ dị na injin ọchụchọ ahụ. Isi uzo nke ụdị nkwalite a:
ndebanye aha na katalọgụ;
na-ebipụta akwụkwọ akụkọ na edemede na ntanetị nke ndị ọzọ.
Ntinye SEO nke mkpokọta websaịtị gụnyere ụdị ọrụ ndị a:
emeputa ihe di iche na nke di elu;
ah ụta isiokwu d ị mma ma ziga ha n ’ederede ọbụla.
Ihe Semalt na-enye
Anyị emeela usoro nke iji bulie okporo ụzọ saịtị gị na visibiliti ọhụụ. Ọrụ abụọ a dị mkpa na-akọwapụta nkwalite SEO. Iji mee ka arụmọrụ kachasị mma, e mepụtala ụzọ pụrụ iche - AutoSEO na FullSEO. Ndị a bụ mkpọsa pụrụ iche nke ị nwere ike isi nweta nsonaazụ n’oge dị mkpirikpi. Ọzọkwa, anyị ga-atụle ha nke ọma, mana ugbu a, ka anyị mara ihe Semalt na-eme n'ezie. Ndị a bụ ndụmọdụ anyị:
vidiyo nkwado maka azụmahịa gị.
Mgbasa ozi AutoSEO nke Semalt
AutoSEO bu otutu uzo emere iji tinye weebụsaịtị gi aka n ’elu onodu ochicho oru. Ọ dị ezigbo mkpa ịghọta usoro a nke ọma. Nke a abụghị anwansi anwansi, mana ebumnuche ebumnuche nke ụlọ ọrụ anyị n'ime usoro njikarịcha SEO. Kwere, ọnụnọ nke pan anaghị ekwe gị nkwa ofe dị ụtọ, yabụ ndị ọkachamara nke ọkachamara dịgasị iche jikọtara ọrụ ahụ. Mgbasa ozi AutoSEO nwere ike ịmị mkpụrụ naanị site na nkwado ndị ahịa na ndị otu Semalt. Nke a bụ ihe AutoSEO gụnyere:
ah ụta isiokwu dabara adaba;
Ugbu a nwee ndidi ma hụ etu o siri dị na omume. Ọ na-amalite site na ndebanye aha na weebụsaịtị anyị. Na-esote, a na-eme ihe niile site na nyocha saịtị, nke na-elezi anya na nhazi nke weebụsaịtị dị ka ụkpụrụ SEO si dị. Nweta ozi niile dị mkpa n'ụdị mkpesa nwere ndepụta nke njehie ndị a ga-edozi. Dabere na nyocha ahụ, injinia SEO na-ekpebi isiokwu ndị dabara adaba nke ga-eme ka ọnụnọ ndị na-aga weebụsaịtị.
Nzọụkwụ ọzọ bụ itinye ntinye ịntanetị na ntanetị dị iche iche. Ọdịnaya ga-adakọrịrị njikọta ma buru uru nnọchiaha. Onye isi anyị, bụ onye na-enyocha ọnọdụ nke njikọ ndị injin nchọta na-enyocha usoro ahụ mgbe niile. Will gaghị echegbu onwe gị banyere ihe, ihe niile dị n'okpuru aka zuru oke na mkpọsa ahụ. A na-ahọrọ ezigbo njikọ ntanetị na ezigbo ziri ezi, yabụ ike nke ịbanye na listi adịghị mkpa.
Site na ịnweta FTP (Protocol Transfer File Protocol), ndị ọkachamara Semalt na-eme ụfọdụ mgbanwe nke egosipụtara n'oge na mkpesa webụsaịtị. Mgbanwe ndị a na-eduga n'ịhazi mkpokọta weebụ. Ibu ọrụ Semalt na ọkwa a gụnyere mmelite ọkwa kwa ụbọchị, site na iwebata isi okwu ọhụrụ dabara na ọdịnaya ahụ. Uru nke AutoSEO bụ na a na-eme mkpọsa ahụ na obere ihe ma ọ bụ na ọ nweghị onye ọrụ, mana ị na-anọnyere ihe niile na-aga. Ihe ngwugwu AutoSEO kwa ọnwa na-akwụ $ 99.
Kedu ihe bụ FullSEO
Iji ghọta nke ọma usoro njikarịcha SEO a, anyị na-enye gị ohere ịmara onwe gị na usoro zuru ezu nke FullSEO, nke ebumnuche na ịbawanye ogo saịtị weebụ na igwe nchọta. Ihe dị iche na AutoSEO bụ na arụpụtara ihe n’ọrụ n’ime obere oge. Ndabere ahụ bụ njikarịcha n'ime na mpụga, nke ndị ọkachamara SEO na-arụ. N'ihi nke a, mkpọsa nke FullSEO ga-enye ọ bụghị naanị iwere ọnọdụ na-eduga n'ahịa ahịa, kamakwa ịkwado ndị asọmpi ahụ.
Atụmatụ mkpọsa nke FullSEO
Mgbasa ozi zuru ezu na-amalite site na oge ị debanyere aha. A na-eme nyocha nke ọma nke weebụsaịtị ahụ, na ntinye nke akụkọ na-esote. Na-esote, onye ọkachamara SEO na-eme mkpebi nke saịtị gị, na-enyocha nhazi ahụ ma na-achọpụta isi okwu mmalite. Site na nyocha ahụ, a na-achọpụta njehie niile ekwesịrị idozi maka inwekwu ọganihu. Mgbe ahụ ọ bụ oge iji kọwaa isi okwu kwesịrị ekwesị iji mee ka okporo ụzọ dịkwuo elu. Ya mere, saịtị ahụ na-etinye uche nke ọma na ọkwa niile. Mgbe ịnweta FTP, ọkachamara ahụ ga-eme mgbanwe ndị dị mkpa akọwapụtara na akụkọ ahụ.
Nzọụkwụ ọzọ ga-abụ njikarịcha nke mpụga. Ndị ọkachamara SEO ga-etinye njikọ n'ime akụrụngwa bara ụba nke na-egosipụta ọdịdị nke ọdịnaya gị. Ka oge na-aga, njikọ ndị a ga-amalite iweta nsonaazụ bara uru maka weebụsaịtị. Na akaụntụ Semalt, enwere ọnụọgụ saịtị doro anya ị nwere ike iji ya rụọ ọrụ, niile maka abamuru nke njikarịcha saịtị gị nke ọma. Mgbasa ozi nke FullSEO dịkwa n'okpuru nlekọta ọkachamara mgbe niile, enwere mmelite oge nke isiokwu, ọ bụrụ achọrọ ya. Iji mee ka gị mara maka mgbanwe niile na uto nke saịtị ahụ, a na-enyefe akụkọ zuru ezu banyere ọkwa weebụsaịtị gị na igwe nchọta ahụ. Usoro a na-aga gburugburu elekere, yabụ ọ gaghị ekwe omume ịhapụ oge ọ bụla dị mkpa.
Mgbe ụfọdụ ọ na - eme na n'ihi ihe ụfọdụ ị kwesịrị ịkwụsịtụ nkwalite SEO. N'okwu a, Google na-ewepu backlinks niile na ebe ndebe data mgbe obere oge gasịrị. Ego ga-ebido na-ada n'ike n'ike, mana echegbula onwe gị, ha ga-anọ n'ọnọdụ ụfọdụ. Ọnọdụ a ga-adị elu karịa nke dị na mbụ tupu ịgba ọsọ FullSEO. Na mkpokọta, njikarịcha SEO ọ bụla bụ nke ọ bụla, ya mere o siri ike ikpebi ọnụahịa nke mkpọsa zuru ezu tupu onye ọkachamara SEO achọpụta saịtị gị n'ụzọ zuru ezu.
Gịnị bụ nyocha
Semalt na-enye njikarịcha SEO site na nchịkọta. N'ikwu ya, ọ bụ ọrụ maka nyocha zuru oke nke weebụsaịtị yana ịmepụta akụkọ zuru oke. Rịba ama na mgbakwunye na nyocha nke saịtị ahụ lekwasịrị anya, ọ na-enyocha saịtị ndị asọmpi, na-anakọta isiokwu iji bulie isi okwu nke weebụsaịtị ahụ, yana iwu ọkwa nke ụdị ndị na-asọmpi. Nchịkọta na-enye ndị a:
onye nyocha ihe ntanetị.
Nchịkọta data nyocha na-amalite ozugbo ị debanyere aha na weebụsaịtị anyị. Nke a na - eme na akpaghị aka, oge ọ bụla ịmechara nchịkọta data gị, ị na - enweta akụkọ na - egosi n'ụzọ doro anya ezigbo ọnọdụ weebụsaịtị gị. A na-enyocha saịtị ndị asọmpi, ị na-enwetakwa ozi niile gbasara ọnọdụ ha. A na-echebara ụkpụrụ SEO mgbe ị na-eke usoro saịtị, yabụ ị na-enwe mgbanwe ọhụụ na nhazi gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ịnweela akaụntụ dị mma, ịnwere ike itinye ego saịtị ọ bụla na kandụl nke gị. A ga-enyocha saịtị niile. Nchoputa mbu gosiri ihe okwu ichoro iji. Usoro ahụ na-ahọrọ naanị ihe dị mkpa maka isiokwu ọdịnaya. Nke ahụ bụ, okwu niile ga-enwe uru bara uru na uto nke ndị na-abịa saịtị. You nwere ike ihichapụ ma ọ bụ tinye okwu ndị ọzọ na ezi uche gị.
Ohere dị mma bụ na anyị nyocha saịtị ahụ ma nyochaa ọganihu ya na elekere. Ọ dị mkpa ịnakọta ozi gbasara ndị asọmpi gị. Na-amata mgbe niile ihe niile na-aga na saịtị ha, ndị nchịkọta na-agwa gị ihe ọ dị mkpa ka e mee iji merie onye asọmpi na igwe nchọta ahụ. You nwere ike iji Nrụpụta Ihe Mmemme Ntanetị (API), nke a kachasị mma n'etiti ndị ọrụ n'ihi na emekọrịta data ahụ na-akpaghị aka, na-enye ohere ka ị lelee mmelite ọ bụla. Enwere ngwugwu tarifu atọ dị na ụdị ọrụ a:
Na Mmepe Weebụ, Semalt na-atụ aro maka ụzọ zuru oke nke na-egosi mmepe zuru ezu na saịtị ọ bụla azụmahịa, yana ịkọpụta akụkụ ya:
ntinye na ngwa nke ato;
Sistemụ Njikwa ọdịnaya;
modulu e-azụmahịa pụrụ iche;
Mmepụta Vidiyo Maka Mmepụta
Atụmatụ ịzụ ahịa dị mkpa n'ọrụ etinyere mgbe ana-ebido nnukwu ọrụ ịntanetị na-azụ ahịa bụ vidiyo na-achịkọta isi na uru nke ụlọ ọrụ ọhụrụ a. Dịka akụkụ nke ọrụ "Nkwalite vidiyo vidiyo" Semalt na-atụ aro ụzọ abụọ iji mepụta vidiyo dị otú a:
site na mkpebi onwe onye (a na-agbakọ ọnụahịa iche).
A na-eme mgbanwe ahụ na ọrụ ịkwụ ụgwọ site na nkọwapụta nke tarifu, site na ịpị bọtịnụ “Subscribedenye aha”. Enwere ike ịzụta ngwugwu tarifu na ego mba ọ bụla. Onye na-ahọpụta igwegharị dị n’elu akụkụ nke ụdị ịkwụ ụgwọ.
Ka emechara ihe niile a dị n’elu, o siri ezigbo ike inwe obi abụọ ma rụọ ọrụ SEO kachasị site na usoro Semalt. Eleghị anya enwere ajụjụ ndị ọzọ pụtara n'ihi na isiokwu enweghị ike ịkọcha banyere nsogbu niile dị oke mkpa. Ya mere, ọ ka mma ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ n'egbughị oge. Ngwa ngwa Semalt nụrụ n'ọnụ gị, ngwa ngwa ị ga-aba ọgaranya. Anyị na-eche gị!